RASMI: Crisitano Ronaldo, Eden Hazard Iyo Neymar jr Oo Hogaaminaya Liiska Musharixiinta Xidigii Kulamadii Shanaad Ee UCL Ugu Fiicnaa Iyo UEFA Oo Liiskan Shaacisay. – WWW.Gool24.net
Sidii looga bartay xidhiidhka kubbada cagta Yurub ee UEFA ayaa soo saaray liiska ciyaartoyda ku tartami doona xidigii ugu fiicnaa kulamadii shanaad ee heerka Goupyada Champions Leaque ee talaadadii iyo arbacadii la ciyaaray. Usbuuc kasta oo la ciyaaro tartanka Champions Leaque, waxay UEFA marka la soo gabagabeeyo kulamadan ay soo saartaa xidigaha ugu bandhiga fiicnaa si jamaahiirta kubbada cagta aduunku ugu codeeyaan xidigii todobaad ee Champions Leaque ugu fiicnaa.
Kulamadii shanaad ee Champions Leaque laga soo ciyaaray waxaa jiray ciyaartoy badan oo bandhig fiican sameeyay isla markaana door wayn ku lahaa natiijooyinkii kulamadii ay kooxahoodu ciyaareen laakiin iyada oo UEFA liiskan ku soo koobta 8 ciyaartoy oo kaliya waxaa ka maqan ciyaartoy badan oo haddii uu liiskani intan ka badan yahay ku soo bixi kartay.
Waxaa liiskan hogaaminaya isla markaana u sharaxan xidigii kulamadii shanaad ee heerka Groupyada ugu fiicnaa Neymar Jr oo markale wacdaro ka dhigay kulankii ay PSG 7-1 ku xasuuqday kooxda Celtic wuxuuna xidiga ree Brazil dhaliyay laba gool halka uu sidoo kale sameeyay hal gool caawin.
Waxa kale oo liiska musharixiinta xidigaha usbuuca Champions Leaque ugu fiican ku jira Cristiano Ronaldo oo laba gool ka dhaliyay isla markaana hal gool caawin ka sameeyay kulankii ay Los Blancos guusha wayn ka soo gaadhay APOEl.
Eden Hazard oo isna hal gool ka dhaliyay sidoo kalena hal gool caawin sameeyay kulankii Qarabag ayaa liiskan ku soo baxay laakiin waxaan liiskan ku jirin Karim Benzema oo laba gool dhaliyay isla markaana gool caawin ka sameeyay kulankii APOEl si lamid ah Roberto Firmino oo kulankii Sevilla laba gool ka dhaliyay.
Waxa kale oo liiskan ku jira Timo Werner- RB Leipzig, Harry Kane- Tottenham , Robert Lewandowski- Bayern Munich , Carrasco- Atletico Madrid iyo Lorenzo Insigne- Napoli oo dhamaantood lagu soo xulay bandhigii fiicnaa ee ay ka sameeyeen kulamadii shanaad ee UCL laga soo ciyaaray.
Haddaba halkan kaga bogo liiska siddeeda ciyaartoy ee mid ka mid ah loo xulan doono xidigii kulamadii shanaad ee Champions Leaque ugu fiicnaa iyo waxqabadkii muuqday ee ay sameeyeen.
1- Neymar Jr- PSG = 2 gool iyo 1 gool caawin
2- Lewandowski- Bayern Munich = 1 gool iyo bandhig guud
3- Carrasco- Atletico Madrid = bandhig guud
4- Eden Hazard- Chelsea = 1 gool iyo 1 gool caawin
5- Cristiano Ronaldo- Real Madrid = 2 gool iyo 1 gool caawin
6- Timo Werner- RB Leipzig = 2 gool
7- Harry Kane- Tottenham = 1 gool iyo bandhig guud
8- Lorenzo Insigne- Napoli = 1 gool iyo bandhig guud.